Profaịlụ ụlọ ọrụ-Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd
Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd tọrọ ntọala na 2003, ọ dị na obodo Hengli mepere emepe, obodo Dongguan, mpaghara Guangdong.Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd bụ ọkachamara na-emepụta ngwaahịa silicone nke nwere ahụmịhe ihe karịrị afọ iri, ọ nwere ndị otu ODM siri ike nke nwere ike ịmepụta ngwaahịa silicone nwere oke mma na ọnụahịa ezi uche dị na ya dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.
Ụlọ ọrụ anyị nwere ike teknụzụ siri ike, OEM & ODM nabatara, ihe niile na ngwaahịa nwere ike ịgafe FDA na LFGB test.Since tọrọ ntọala na 2003, anyị lekwasịrị anya bụ inye ndị ahịa "ọnụahịa ezi uche", "Ngwaahịa dị elu" na " N'oge nnyefe".
Ndị ọrụ anyị na-agbasawanye site na ndị ọrụ 10 ruo ihe karịrị ndị ọrụ 50, ụlọ ọrụ nwere mpaghara nwere 3000 sq.m., yana akụrụngwa mmepụta 20 dị iche iche yana ihe karịrị tọn 150 nke akụrụngwa kwa afọ.Anyị na-ere ngwaahịa n'ahịa ụlọ na ahịa mba ofesi ruo ọtụtụ afọ.
Brand StoryOnye nchoputa nke Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd, Mr Jiawei Li, malitere ịrụ ọrụ n'ichepụta ngwá ọrụ silicone mgbe ọ dị afọ 16 ma nọrọ ebe ahụ maka afọ 8.
Na 2002, ọ gara Shanghai mba silicone ngosi, hụrụ ụfọdụ silicone ngwaahịa nke dị na Germany, ọ na-mmasị miri emi ha pụrụ iche imewe, elu n'ichepụta Usoro na fọrọ nke nta siri ike nkọwa.
Ọ kere visual stimuli, n'oge ahụ, a ika aha a na-akpọ "Weishun Silicone" e tọrọ ntọala n'uche ya, o kpebisiri ike ike a Chinese ma ama silicone ngwaahịa n'ichepụta enterprise na-enwe mba aha n'ọdịnihu.
Ya mere, Mazị Jiawei Li chọtara "Weishun Silicone" nke ya n'afọ na-abịa, nke bụ ebumnuche ịmepụta ụdị ngwaahịa silicone dị iche iche dị nchebe na nri.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ WeiShun Silicone